Local – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ကျင်းပ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သြစတြေးလျအစိုးရ ပညာသင်ဆုရ မြန်မာကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (AAMA)က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျား-မတန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ ဖိုရိမ်အား ၁၀-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ PARKROYAL ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသနေသော ဆရာဝန်များ ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာကုသရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၁၂လတာ သင်တန်းပေးမည်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုအတွေ့အကြုံ ၃နှစ်ရှိပြီးသော ဆရာဝန်များ ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာကုသရေး အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ၁၂လတာ သင်တန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ဂရင်းဟံသာ အင်တာနေရှင်နယ် ဆေးရုံတွင်ပြုလုပ်ကျင်းပသော မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအသင်းတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် Certificate Course in...
တကောင်းမြို့၌ မိန်းကလေးသုံးမြွာပူး အောင်မြင်စွာမွေးဖွား
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ တကောင်းမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ ၄-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခန့်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် မအေးခိုင်၏ သုံးမြွှာပူးကလေးငယ်များကို ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာစိုးနိုင်ဝင်းနှင့် ၀န်ထမ်းများက အောင်မြင်စွာမွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသုံးမြွှာပူးကလေးများမှာ သမီးမိန်းကလေးများဖြစ်ကြပြီး ပထမကလေးမှာ...
ခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးထားဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လမ်းညွှန်အမှာစကားပြောကြား
မြန်မာ CDC ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာစနစ်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစီမံချက် (GMS Health Security Project) စီမံချက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်နှင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၄၇တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနား၌...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဦးတည်၍ ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါဆိုင်ရာ လူထုလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်သွားမည်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆေးယဉ်ပါးတီဘီရောဂါဆိုင်ရာ လူထုလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းကို မတ်လ၂၄ရက်တွင်ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့တီဘီရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မတိုင်မီ ကြားကာလအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုနှင့် အခြား မီဒီယာများမှတစ်ဆင့် လူထုအသိပညာပေး လှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားအဆင့် တီဘီရောဂါဆိုင်ရာ...
HIV ရှိသူများနှင့် ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ဦးတည်အုပ်စုဝင်များအတွက် ပိုးစစ်ဆေးကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှစ်နှစ်တာ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မည်
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) HIV ရှိသူများနှင့် HIV ကူးစက်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ဦးတည်အုပ်စုဝင်များအတွက် HIV ပိုးစစ်ဆေး ကာကွယ်ကုသမှုလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ နှစ်နှစ်တာ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုနှင့် ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ စီမံချက် မန်နေဂျာဒေါက်တာထွန်းညွန့်ဦးက...
သာမန်လူများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ အရေပြား တစ်လွှာသာ ပါသဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံးအနာများနှင့် သွေးများထွက်နေရှာသည့် သမီးလေး ချစ်စနိုးဦး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မွေးရာပါ အရေပြားပါးလွန်းသည့် ရောဂါကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးအနာများဖြစ်ပြီး သွေးများထွက်နေရှာသည့် အသက် ၉ နှစ်အရွယ်သမီးလေးချစ်စနိုးဦးအတွက် ဆေးကုသစရိတ်နှင့် အာဟာရအခက်အခဲများရှိနေကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ မကြည်ကြည်သိန်း Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ၂၃-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့က ပြောသည်။...
တောင်တွင်းကြီးမြို့နေ ဒေါ်ခင်မာကြူ၏ သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံး တွေ့ရှိခဲ့ရ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ ချောင်းနက်အရှေ့စုရွာတွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၅၀နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်မာကြူ၏ သည်းခြေအိတ်မှ သည်းခြေကျောက် ၉၀၁ လုံးတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ “ရင်ခေါင်းအောင့်ပြီး တင်းနေတယ်။ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ဘူး၊ အစာလည်း လက်မခံဘူး။...
♦ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) USAIDS ၏ Flagshipပရော့ဂျက်တစ်ခု ဖြစ်သည့် UHFစီမံချက်အရ အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုး နှင့် HIVပိုးတွဲဖြစ်သူ လူနာ ၁၆၀ဦးကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဝေဘာဂီဆေးရုံတွင် အခမဲ့ ကုသမှုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ခုခံအားကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာန၊ စီမံချက်မန်နေဂျာ...
ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ ဆုံဆို့နာရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရတဲ့ ကလေးတွေပိုများလာပါတယ် . . .
ဒေါက်တာညိမ်းအေးဝင့် (ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကထိက၊ ကလေးကျန်းမာပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဆုံဆို့နာရောဂါက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ C.diphtheriae ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ မေး. ဆုံဆို့နာမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။...